Ranbir Kapoor “Anushka Sharma Shumiska Aadbay U Taqaan, Qofkii Helaa Nasiib Leh”. - iftineducation.com
iftineducation.com – Jilaaga la wada jecel yahay Ranbir Kapoor wuxuu u dabaal dagayaa guusha filimkiisa Ae Dil Hai Mushkil oo gudaha Hindiya Hit ka noqday halka suuqyada caalamka uu Super Hit weyn ka noqday.
Hadaba Ranbir Kapoor xili uu ka qayb galaayay wareysi mada daalo ku dheehan oo isaga iyo Anushka Sharma ka qaaday shabakada Bollywood Hungama arimo xiiso badan ayuu daaha ka qaaday.
Waxyaabaha soo jiidashada leh ee RK laga haayo waxaa ka mid ah inuu yiri “Anushka Sharma shumiska aadbay u taqaan, waxaana jeclaan lahaa inaan marar badan shumiyo filimka Ae Dil Hai Mushkil, qofkii helaa nasiib leh!”
Ranbir Kapoor waxaa la weydiiyay inuu kala doorto Anushka Sharma iyo Aishwarya Rai Bachchan qofka shumiska ku wanaagsan (better Kisser).
Wuxuuna ku jawaabay “Aniga Aishwara Rai filimka ADHM shumis kulama wadaagin laakiin Anushka ayaan marar badan la wadaagay filimo kala duwan marka iyadaa shumis shameynta ku wacan!”
Anushka Sharma oo goobta ku sugney iyada waxay ku jawaabtay “Ranbir waa in lagu ciqaabaa jawaabta uu bixiyay!”
Waxaa la wada xasuusta in sanadkii hore filimka Bombay Velvet Ranbir iyo Anushka shumisyo waali ah ku wadaageen oo ay qaarkood gudiga filimada faaf reebaan diideen in bulshada muuqaaladaas loo gudbiyo.
Fadlan hoos kaga bogo Video-ka mada daalada u badan ee Ranbir iyo Anushka wareysi ku siiyeen Bollywood Hungama:
Ilhan Omar: Former refugee and America’s first Somali-American Muslim woman legislator is elected